Maayar Ismaaciil Xaji Nuur Oo Sheegay Inuu Baaqday Shir Beeleed Ceerigaabo | Somaliland.Org
Maayar Ismaaciil Xaji Nuur Oo Sheegay Inuu Baaqday Shir Beeleed Ceerigaabo
June 27, 2012	CEERIGAABO (Somaliland.Org)- Maayarka Magaaladda Ceerigaabo Md. Ismaaciil Xaaji Nuur, ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inaanu jirin wax shir ah oo beelaha Habar-yoonis uga furmaya magaaladda Ceerigaabo 29-ka Bishan.
Maayarku wuxuu sheegay inaan magaaladda lagu qaban Karin wax shir ah, ka dib markii sida uu sheegay salaadiintii iyo cuqaashii markii hore fidiyay martiqaadka shirkaasi ay dhawaan cadeeyeen inay dib u dhigeen illaa 10/10/2012-ka, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Waxaan ummadda cadaynayaa inaanu jirin wax shir ah oo deegaanka Daallo ee duleedka Ceerigaabo uga furmaya beelaha Habar-yoonis. Sababta oo ah waxa shirkaasi ay salaadiintii iyo waxgaradkii gogoshiisa lahaa ay soo saareen baaq ay u dhan yihiin oo ay dib ugu dhigeen illaa 10-ka Bisha October ee fooda inagu soo haysa.”
Maayarka magaaladda Ceerigaabo waxa uu sheegay inuu ergooyinkii shirkaasi danaynay aanay ku soo lug go’in goob aanu wax shir ahi ka qabsoomayn.
“Waxaan ahay oday beelaha shirkan qabsanayay ka mid ah, sidaasi darteed, waxaan ugu celinayaa mar kale inaanay odayaasha iyo mudanka ardaayadda beeluhu ku soo lug go’in Ceerigaabo.. waxaanan leeyahay ninkii ALLE gaadhsiiyaa ha yimaado xiligaasi loo mudeeyay.
Dhinaca kale waxa jiray kooxo sheegay inay 29-ka bishan duleedka Ceerigaabo ka furayaan shir dhaqan oo ay yeelanayaan beelaha Habar-yoonis. Waxaana salaadiin iyo cuqaasha gobolka Sanaag ay dhawaan dib u dhigeen shirkaasi oo ay u mudeeyeen 10-ka bisha October ee fooda inagu soo haysa.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo u kicitimay Imaaraadka carabtaNext Post‘Dhammaanshaha kala-guurka Soomaaliya, waxay fursad u tahay wada-hadallada iyo habsami-u-socodkooda’	Blog